Ama-FAQs - I-Shandong Buluoer Intelligent Technology Co, Ltd.
I-Fiber laser FAQ
Umbuzo: Ingabe umshini wokusika i-CNC Fibre Laser wokusika i-Carbon Steel & Insimbi Engagqwali?
Re: a1. Umshini wokusika i-CNC Fibre Laser for Carbon Steel & Stainless Steel warrenty yisikhathi esiyizinyanga eziyi-12 ngemuva kwesikhathi se-BL;
a2.12 amahora wokusekelwa kwezobuchwepheshe;
a3. Ifektri eyakha imishini, engalawula ikhwalithi yezingxenye ezisezingeni eliphezulu;
a4. Indawo yokugcina impahla yomsebenzisi nomsebenzisi angajabulela intengo ye-ejenti.
B. Umbuzo: Sinjani isikhathi sokulethwa?
Re: Singaletha imishini kungakapheli izinsuku eziyi-15-25 uma sinemishini esitokweni.
Isikhathi esijwayelekile sokufakelwa komshini izinsuku ezingama-5-7 kanye nesikhathi sokwakhiwa komshini se-CNC cishe zingama-25-45 izinsuku.Uma usenze ngokwezifiso
imikhiqizo, isikhathi sokulethwa sizonikezwa ngemuva kokuqinisekiswa.
C. Umbuzo: Kukhokhwa kanjani?
Re: 50% yemali njengediphozi futhi ibhalansi kufanele ikhokhwe yi-T / T noma i-LC lapho ibonwa ngaphambi kokulethwa komthengisi imishini
D: Umbuzo: Lithini iphakethe?
Re: Sineziphakethe ezintathu zezingqimba. Okwangaphandle, sisebenzisa ikesi lobuciko bezinkuni. Phakathi nendawo, umshini umbozwe amagwebu, ukuvikela
umshini wokuqhaqhazela. Ngolwelwesi lwangaphakathi, umshini umbozwe ukuqina kwesikhwama seplastiki ukuze kungangeni manzi.
E: Umbuzo: Ngingenza kanjani uma umshini ungahambi kahle?
Re: Uma ubhekene nezinkinga ezinjalo, sicela uxhumane nathi asap futhi ungazami ukulungisa umshini wedwa noma ngomunye umuntu.
Q1: Kuthiwani ngewaranti?
I-A1: iminyaka emi-2 yesiqinisekiso sekhwalithi, umshini onezingxenye eziyinhloko (ngaphandle kokuthengwayo) uzoshintshwa mahhala (ezinye izingxenye zizogcinwa) uma kunenkinga phakathi nesikhathi sewaranti.
Q2: 2 Angazi ukuthi iyiphi efanele kimi?
A2: Ake ungitshele eyakho
1) Usayizi womsebenzi omkhulu: khetha imodeli efaneleke kakhulu.
2) Izinto nobukhulu bokusika :: khetha amandla afanele kakhulu.
Q3: Imibandela Yokukhokha?
I-A3: Isiqinisekiso sokuhweba se-Alibaba / TT / West Union / Payple / LC / Cash njalonjalo.
Q4: Ingabe unemibhalo yokuvunyelwa kwesiko?
I-A4: Yebo, sinakho.Kuqala sizokukhombisa futhi Futhi ngemuva kokuthunyelwa sizokunikeza uhlu lokupakisha / i-invoyisi yezohwebo / inkontileka yokuthengisa / i-Bill of lading for clear clearance.
Q5: Angazi ukuthi ngisebenzise kanjani ngemuva kokuthi ngithole Noma nginenkinga ngesikhathi sokusebenzisa, ngenza kanjani?
I-A5: 1) Sisebenzise ividiyo, ungafunda isinyathelo ngesinyathelo, futhi singavumela uchwepheshe wethu ukuba abe ngakwakho ukuqeqeshwa.
2) Uma unenkinga ngesikhathi sokusebenzisa, udinga uchwepheshe wethu ukwahlulela
Inkinga kwenye indawo izoxazululeka yithi. Singanikeza isibukeli sethimba
/ I-WhatsApp / i-imeyili / Ucingo / i-Skype ene-cam kuze kube yilapho zonke izinkinga zakho seziqediwe. Singanikeza nomsebenzi we-Door uma udinga.
I-Q6: Isikhathi sokulethwa
A6: Ukucushwa okujwayelekile: Izinsuku eziyi-7. Kwenziwe ngentando: izinsuku ezingu-7-10 zokusebenza.
Uma ufuna ukwazi ukuthi umshini ungasebenza ezintweni zakho yini, ngicela ungitshele:
1.Yiziphi izinto ofuna ukuzisika?
Ngoba inqume ubungako bokusebenza komshini.
Uma ungitshele ngalokhu, khona-ke ngiyakwazi ukukuncoma ngomshini ofanele kakhulu nentengo engcono kakhulu kuwe. Noma singakwenza kube ngokwezifiso zakho.
Lesi isikhathi sokuqala ngisebenzisa lolu hlobo lomshini, kulula ukusebenzisa?
1. Incwadi ye-English guide yevidiyo nemiyalo ithunyelwa kuwe mahhala kanye ne-cnc router.
2. Ukuqeqeshwa kwamahhala embonini yethu. Onjiniyela bayatholakala ukuthi bakhonze phesheya kepha zonke izindleko ziyakhokhwa eceleni kwakho.
3. amahora angama-24 ukwesekwa kwezobuchwepheshe ngokubiza, ividiyo kanye ne-imeyili.
30% T / T kusengaphambili, 70% T / T ngaphambi kokubeletha.
Ngemuva kokuthola idiphozithi yakho, sizohlela ukukhiqizwa, ngesikhathi sokukhiqiza, sizobika ikhwalithi yokukhiqiza, inqubekelaphambili yomkhiqizo ukuze siqinisekise ukuthi amaklayenti alawula ngokuphelele, izithombe zomshini kanye namavidiyo azothunyelwa kumakhasimende ngesikhathi, lapho eqinisekisa ukuthi yonke into ikhona kulungile, dlulisa ibhalansi futhi sihlela kumshini wokulethwa.